नङ हेरविचार हात र खुट्टा को लागि हेरविचार को एक तार्किक लडी छ, र तिनीहरूलाई स्वस्थ र आकर्षक उपस्थिति सबै सकेसम्म धेरै (चिकित्सा र सौंदर्य दुवै मामलामा) प्रक्रियाहरु दिइएको हुनुपर्छ दिन। विभिन्न डिटर्जेंट गर्न लामो समयसम्म जोखिम, साथै कम गुणस्तर नङ पालिस रिमुभर लागि अर्थ, नङ सतह प्रतिरोध घट्छ, विभिन्न क्षति हो कारण जो। चेतावनी संकेत प्लेट खुर, कठोरता, बल, चरण अलग को हानि, को नङ को रंग को परिवर्तन सेवा गर्छन्। गरिब पेडीक्योर वा मैनीक्योर को नतिजा पनि अक्सर एक खराब तरिका देखाए। Microtraumas फंगल संक्रमण वा जीवाणु प्रकृति प्रवेश, नङ ओछ्यानमा लागू हुन सक्छ।
यदि नङ लामो कटौती गर्न पनि गाह्रो, यो आफ्नो त्यहाँ पुरानो सुनिंनु हो किन छ जो छाला, मा बढ्दै सक्छ। एकै समयमा पनि लामो नङ त्यसैले खुर र, delamination झुकाउ भंगुर हुन सक्छ। जब नङ हेरविचार अत्यन्तै महत्त्वपूर्ण अधिकतम लम्बाइ छ।
Manicurist कि नङ हेरविचार दुई पटक एक हप्ता हुनुपर्छ भन्छन्। को नङ को हेरविचार अन्तर्गत प्रक्रियाहरु को एक सेट बुझ्ने गरिन्छ:
नङ लागि स्नान;
शमन र नङ पोषण;
को स्थलहरू को शुद्धीकरण;
trimming र दाखिला;
नङ लागि स्नान हप्ताको एक पटक गर्नुपर्छ। को नङ वरिपरि कुनै न कुनै छाला नरम गर्न, साथै पलिश नङ गर्न नङ तयार गर्न, तपाईं फोम संग स्नान प्रयोग गर्न सक्नुहुन्छ। पानी वरिपरि 40 डिग्री सेल्सियस हुनुपर्छ। पानी मा, नङ मृदुकरण बारेमा पाँच मिनेट लागि स्नान मा पकड लागि एजेन्ट थप्नुहोस्। जब टूटना र नङ को स्तरीकरण प्रयोग तेल स्नान गरे। को औंलाहरु बादाम, भिटामिन ए र कागति को रस थप्छ जो जैतून वा आरु घिउ, मा 10-15 मिनेट डूबा गर्नुपर्छ। यस्तो स्नान पलिश chapped, शुष्क cuticles लागि ठूलो छ। धेरै सजिलो छ कि अर्को प्रक्रिया घर एक स्नान ले unrefined सूर्यमुखी तेल, थपिएको छ जो आयोडिन एक रक्सी समाधान, बस5घटेको।
को नङ प्लेट stratified छ भने, यो खनिज पानी को आधा ग्लास यो गिरावट लागि खनिज पानी, हात संग स्नान गर्न सिफारिस गरिएको छ।
नुन स्नान पलिश छाला र भंगुर नङ peeling विरुद्ध सुरक्षा। प्रक्रिया सर्वश्रेष्ठ साँझ गरेको छ। पानी अलि नुन उम्लिरहेको एक कन्टेनर थप्न, समाधान शांत। हात, एक हट नुनखरा समाधान मा केहि सेकेन्ड पकड, पानी धुन ड्राई गर्न आवश्यक छ। कि पछि, छाला ग्लिसेरिन RUB गर्न सक्नुहुन्छ।
नङ लागि स्नान Firming
त्यहाँ व्यञ्जनहरु को धेरै छन् स्नान पलिश reinforcing। सबैलाई एक विशाल विविधता देखि whichever विकल्प चयन गर्न सक्नुहुन्छ। तपाईं नुन र आयोडिन आधारित सुझावहरू थप्न सक्नुहुन्छ। यो गर्न, नुन को एक spoonful, आयोडिन केही घटेको, न्यानो पानी एक गिलास लिन। पानी सबै भंग। यो समाधान मा केहि सेकेन्ड को लागि ब्रश डिप र त्यसपछि आफ्नो हात र क्रीम संग thickly प्रसार संग राम्ररी कुल्ला आवश्यक छ।
तपाईं जडीबुटी आधारमा स्नान गर्न सक्छन्। सुकेको plantain पात को एक spoonful र पानी लीटर लिनुहोस्। पाँच मिनेट घाँस उसिनेर। अर्को embodiment मा, दुई चम्मच hypericum, chamomile, burdock र छाल एक मिश्रण। मिश्रण उसिनेर पानी एक गिलास, आधा घण्टा भरिएको र ट्रे रूपमा प्रयोग भएको थियो। अर्को विकल्प छ camomile ओक छाल संग।
तपाईं एक पेडीक्योर लागि ट्रे आवश्यक छ भने, तपाईं यी उद्देश्यका तेल लागि प्रयोग गर्न सक्नुहुन्छ। उदाहरणका लागि, यस्तो भेद। एक पानी स्नान मा तेल को आधा कप गरम, एक कचौरा मा खन्याउन। केही समय यो तपाईंको औंलाहरु पकड।
एक नङ हेरविचार प्रतिक्रिया, तपाईं एक अद्भुत मैनीक्योर र पेडीक्योर प्राप्त हुनेछ।
कसरी आफ्नै व्यावसायिक मैनीक्योर बनाउन सिक्न?
सान मार्को - भेनिस मा गिर्जाघर। विवरण, इतिहास र रोचक तथ्य
चेल्याबिंस्क। चम्बर थियेटर: सम्राट, इतिहास
Vysokinsky ताल: वर्णन, सुविधाहरू, फोटो
खुला क्षेत्रमा र ग्रीनहाउस मा टमाटर रोपेर कति टाढा गर्न?
जनसंख्या मोरक्को: सुविधाहरू, आकार, रोजगार, र रोचक तथ्य
एक लिपस्टिक कसरी चयन गर्ने? छनौट लागि सुझाव
होटल सोल Calas de Mallorca4* (स्पेन, मलोर्का): विवरण, सेवा,